Ha sugin. Waqtigu weligiis sax ma noqon doono. - Napoleon Hill - xigasho Pedia
Ha sugin. Waqtigu weligiis sax ma noqon doono. - Napoleon Hill
Sugiddu waa mid ka mid ah qaybaha ugu caansan cilmu-nafsiga. Bini aadam ahaan, inteena badan waxay nala tahay inaan sugno illaa xaaladdeena wanaagsan ay dhacdo. Sababtaas awgeed, waxaan had iyo jeer door bidnaa waqtiga saxda ah ee soo socda. Si kastaba ha noqotee, waxa muhiimka ah ee ay tahay inaad fahanto taas waqtiga saxda ah weligiis ma dhici doono.
Ma jiro wax la yiraahdo waqtiga saxda ah. Waa inaad qirato in waxkasta oo aad qorsheynayso inaad sameyso, ay tahay inaad hadda sameyso. Haddii kale, way soo daahi doontaa. Marka, waxa ugu fiican ee aad sameyn karto waa inaadan sugin.
Waan ognahay inaad noloshaada ku leedahay qorshayaal qaar. Waxaadna sugaysaa waqtiga saxda ah ee aad ku fuliso qorshahaaga. Laakiin, haddii aad rabto inaad ka marag kacdo guusha gaadhista qorshayaashaada, waa inaad hadda bilawdaa.
Laga yaabee, waxay qaadan doontaa waqti xoogaa, laakiin natiijada waxay noqon doontaa midho badan. Waxaa intaas dheer, sugitaanku wax kuu tari maayo adiga mooyaane lumin waqtigaaga qaaliga ah. Hadana haddii aad waqti gasho, waligaa ma gaadhi kartid guusha aad doonayso noloshaada.
Marka, waa waqtiga ay tahay inaad ku biloowdo dadaal buuxa. Waxaan kuu xaqiijinayna inaad hadafkaaga gaari doontid waqti la'aan.
Ha Sug Sugannada
Ha ku lumin Quusin Waqtigaaga
Xigashooyinka ku saabsan Waqtiga iyo Isbedelka
Waqtiyada Maareynta Waqtiga
Waqtiga Qiimaha Waqtiga
Habdhaqan maskaxeed toosan waa fikirka saxda ah ee maskaxda. - Napoleon Hill
Habdhaqan maskaxeed toosan waa fikirka saxda ah ee maskaxda. - xigashooyinka Napoleon Hill
Fursadu badanaa waxay iskugu timaadaa qaab xun, ama guul-darro ku-meel-gaadh ah. - Napoleon Hill
Fursadu badanaa waxay isu beddeshaa nooc masiibo ah, ama guuldarro ku meel gaadh ah. - xigashooyinka Napoleon Hill
Meesha laga bilaabo dhamaan guulaha waa rabitaan. - Napoleon Hill
Rabitaanku waa dareen xoog leh oo raba inuu wax uun gaadho. Rabitaanku sidoo kale waxaa loola jeedaa rabitaanka shay…
Haddii aadan sameyn karin waxyaabo waaweyn, wax yar u samee waxyaabo waaweyn. - Napoleon Hill
Marna lagama maarmaan ma aha in la sameeyo waxyaabo waaweyn oo lagu guuleysto. Dadka guuleysta waxay guul ku gaareen…
Waa run macno ahaan inaad ugu guuleysan karto sida ugu dhaqsaha badan uguna dhakhso badan adoo caawinaya dadka kale guusha. - Napoleon Hill
Nolosha dhexdeeda, waxaad u baahan tahay inaad wax ka baratid sida loo naxariisto oo loo caawiyo dadka kale xilliyada dhibaatada. Waxaa…